Kaabsoolka kafee waa in dib loogu warshadeeyo weel gaar ah | Cusbooneysiinta Cagaaran
Kaabsoolka kafeega waa in dib loogu warshadeeyo weel gaar ah
Jarmal Portillo | | Dib u warshadaynta
Bulshadeenna maanta waxaan soo saarnaa qashin aan tiro lahayn dhamaadka maalinta. Ma aha oo kaliya tiro, laakiin noocyo kala duwan ah. Caadada u ah qashinka iyo dib u warshadeynta caadiga ah, sida balaastigyada, baakadaha, waraaqaha iyo kartoonada, dhalooyinka iyo waxyaabaha dabiiciga ah, ma aragno inay jiraan qashin kale oo badan oo ay tahay in wax lagula qabto
Xaaladdan oo kale, waxaan ka hadlaynaa Hadha kaabsal kafee. Ka soo horjeedka waxa qofku u malayn karo, kaabsollada kafee waa in aan lagu shubin weelka jaallaha ah, laakiin waxaa jira farsamooyin ay shirkaduhu soo saareen si ay u ururiyaan una daweeyaan qashinka noocan ah Ma rabtaa inaad ogaato waxa lagu sameeyo kaabsoosha kafeega?
1 Haraaga qaxwada
2 Qalabka dib loo cusbooneysiin karo
Kaabsoosha kafeega looma tixgeliyo baakado sida ku cad Sharciga Baakadaha iyo Qashinka. Tani waa sababta oo ah kaabsoolka lama kala qaybin karo badeecada ay ku jiraan. Sababtaas awgeed, ma gasho silsiladda dib-u-warshadaynta baakadaha sida dhalooyinka, gasacadaha ama lebennada lagu rido weelka jaallaha ah laakiin waa in loo sameeyaa siyaabo kale.
Si loo daweeyo qashinkaas, shirkadaha sida Nespresso iyo Dolce Gusto waxay hirgeliyeen barnaamijyo lagu daweynayo qashinka oo dib loo warshadeeyo. Qodobbo nadiif ah si dib loogu warshadeeyo kaabsollada kafeega ayaa lagu rakibay illaa bishii Febraayo 2011 magaalada Barcelona. Guud ahaan Isbaanishka, hareeraha ayaa laga qaybiyey 150 dhibcood oo loogu talagalay Dolce Gusto iyo 770 ee Nespresso. Shirkaduhu waxay ku andacoonayaan inay awoodaan inay dib u warshadeeyaan 75% kaabsoolayaasha ay iibiyaan, laakiin waxay ku guuldareysteen inay xaqiijiyaan mugga ay macaamiisha dhab ahaan ugu soo laabanayaan konteenarada.
Qalabka dib loo cusbooneysiin karo
Cabbirkani waa fikrad wanaagsan, laakiin jahliga in kaabsoosha ay leeyihiin bar dib-u-warshadeyn u gaar ah ayaa ku dhow guud. Kadib daraasad ay samaysay Ururka Macaamiisha Isbaanishka (OCU), waxaa la ogaaday in kaliya 18% macaamiisha iibsada kaabsooshaas ayaa dib u warshadeeya meelaha ay dhigtaan. Si kastaba ha noqotee, 73% waxay qireen inay iyagu tuureen.
Shirkaduhu waxay kala soocaan qalabka caagga ah ama aluminium, siday u kala horreeyaan, kafee. Kuwii hore waxaa dib loogu warshadeeyay dhir ku takhasustay qalabkan. Balaastik ayaa loo isticmaalaa, tusaale ahaan, soo saarista qalabka guryaha ee magaalooyinka sida kuraasta ama dambiilaha qashinka. Qaxwaha sidoo kale waxaa dib loo warshadeeyaa in uu dhir ahaan u noqdo compost.
Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in aqoontaas la gaarsiiyo dad badan si qalabkaas looga faa’iideysto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Deegaanka » Dib u warshadaynta » Kaabsoolka kafeega waa in dib loogu warshadeeyo weel gaar ah
Guddiga Yurub wuxuu soo bandhigayaa soo-jeedin cusub oo lagu yareynayo qiiqa
Guriyeyaasha lagu koriyo ee qorraxda ayaa awood u leh inay soo saaraan tamar iyo beero